डोल्पाको बाटो बन्द भएपछि बामदेव रुकुम र प्युठान रोज्दै ! - Everest Dainik - News from Nepal
डोल्पाको बाटो बन्द भएपछि बामदेव रुकुम र प्युठान रोज्दै !
काठमाडौं, भदौ २६ । डोल्पाका सांसद बुढाले राजीनामा नदिने भएपछि वामदेवका लागि उपनिर्वाचन गराउने अर्को क्षेत्रको खोजी हुन थालेको छ । पूर्वी रुकुम र प्युठान विकल्प हुन सक्ने भन्दै छलफल चलेको छ । पूर्वी रुकुममा कमला रोक्का र प्युठानमा दुर्गा पौडेल सांसद छन् ।
‘मलाई राजीनामा गराएर वामदेव गौतमलाई उठाउने विषय औपचारिक रूपमा मसमक्ष आइपुगेको छैन । तर, नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको मैले पनि सुनेकी छु,’ पूर्वी रुकुमबाट निर्वाचित सांसद रोक्काले भनिन् ।
यस्तै, वाम गठबन्धनअन्तर्गत प्युठानबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने विषयमा पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।
याे पनि पढ्नुस हारपछि बामदेवको जोशिलो विज्ञप्ति - निराश भएको छैन
यसअघि वामदेवले ललितपुर १ बाट निर्वाचित नवराज सिलवाल, नवलपरासी (नवलपुर) का तिलक महत र प्युठानबाट निर्वाचित दुर्गा पौडेलमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर उम्मेदवार बन्ने योजना बनाएका थिए । तर, तीनैजनाले अस्वीकार गरेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा डोल्पा रोजेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
केही दिनमै सचिवालयले निर्णय गर्छः वामदेव गौतम
केही दिनभित्रै सचिवालय बैठक बस्दै छ । उपनिर्वाचनमा उठ्ने-नउठ्ने भन्ने विषयमा सचिवालय बैठकमा छलफल हुन सक्छ । उठ्ने-नउठ्ने भन्ने विषय बैठकपछि मात्र केही भन्न सकिएला ।
ट्याग्स: Bamdev Gautam, cpn, Puthan, rukum